DONALD TRUMP OO DIIWAANKA MADOW KU DARAY MADAXWEYNIHII HORE EE GAMBIA YAHYA JAMMEH | Saxil News Network
DONALD TRUMP OO DIIWAANKA MADOW KU DARAY MADAXWEYNIHII HORE EE GAMBIA YAHYA JAMMEH
Washington:-(saxilnews.com) Mareykanka ayaa cunna qabateyn saaray madaxweynihii hore ee Gambia, Yahya Jammeh, oo lagu eedeeyay “in uu xaday ugu yaraan $50 milyan oo dollar” oo ka mid ahaa dakhliga dowladda, ka hor inta uusan dalka ka bixin bishii January ee horraantii sannadkan.
Warbixin ay soo saartay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in 22-kii sanno ee xilka uu yahay uu “galay taariikh ku saabsan xadgudubyo daran oo aadanaha ka dhan ah iyo musuqmaasuq”.
“Jammeh wuxuu aasaasay ciidammada shirqoolka dilka iyo argagax gelinta oo loo garanayay duur ku jir kuwaas oo isaga toos ugu xirnaa. Jammeh wuxuu kooxdaasi u adeegsaday handadaadda, argagax gelinta, jirdilka iyo dilidda shaqsiyaadka uu Jammeh u arkay in ay halis ku yihiin”, ayaa lagu yiri qoraalka.
“Muddadii uu xilka hayay, Jammeh wuxuu adeegsaday mashaariic musuqmaasuq si uu u xado ama u uruursado hantida dalka Gambia. shaqsi ahaanna uga faa’ido. Baaritaan ayaa socdo oo lagu soo bandhigi doono xatooyada ballaaran ee Jammeh uu ku sameeyay dalka markii uu xilka ka tagayay,” ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka.